Munaasabad Loogu Dabaal Dagayay Dhalashada Nabigeena Muxamed NNKH oo Lagu Qabtay Nairobi “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Munaasabado balaaran oo ay soo qabanqaabiyeen culumaa’udiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo loogu dabaal dagayay dhalashada nabigeena Muxamed NNKH ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
Galinkii hore ee maanta ayaa waxaa munaasabad loogu dabaal dagayay oo lagu weyneynayay dhalashada nabigeena Muxamed NNKH waxaa lagu qabtay Masjidul Saxaabah oo ku yaalo wadada 12-aaad ee xaafada islii,waxana culumaa;udiinkii ka qeyb galay ay ka soo jeediyeen muxaadarooyin ku aadan sida ay lagama maarmaan u tahay in loo dabaal dago oo la xasuusto maalinta uu dhashay nabigeena Muxamed NNKH.
Ka dib salaadii casir ayaa culumaa’udiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca waxa ay ka soo baxeen masaajida ku taalo xaafada Islii,waxana socod dheer ku soo maray wadooyinka xaafada,iyagoo qaadayay saliga nabigeena Muxamed NNKH.
Culumaa’udiinka ayaa goob fagaare ah kula hadlay dadweyne boqolaal gaarayay oo u soo baxay ka qeyb qaadashada dabaal dagga dhalashada nabigeena Muxamed NNKH.
Culumaa’diinka ayaa khudbado u jeediyay kala duwan u jeediyay dadweynihii ka soo qeyb galay munaasabadda dabaal dagga dhalashada nabiigeena Muxamed NNKH.
Sanad kasta ayaa Culumaa’udiinka Ahlu Sunna waxa ay meel kasta ka joogaan caalamka 12-ka bisha Rabiicul awal u dabaal dagaan dhalashada nabigeena Muxamed NNKH.
Sawir qaade:C/raxmaan Cumar Cabdi (Somali)
Dhageyso Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada ee ka baxa Radio Muqdisho